Muna 2019, WhatsApp yakasvika Mamiriyoni maviri evashandisi vepasirose uye yakazvisimbisa se iyo inonyanyozivikanwa mameseji ekutumira mafoni epasi rese.
Pakavambwa programu muna2009, yaingova a Basic SMS chikuva chakakubvumidza kupinda, kutumira mameseji meseji, kutumira mafoto kana mavhidhiyo, uye kuita mafoni enzwi pasi rese uchishandisa Wi-Fi. App yakava yakakurumbira senge imwe nzira yekubhadhara inodhura mafoni kubhadhara kune vadikanwa pasi rese.
Semumwe wevatorwa veWhatsApp vekare, ini ndakawana iyo app pandaidzidza kunze kwenyika muIreland.
Mushure mekuridza foni yangu yefoni yeUS nemari inofamba-famba uye kushandisa ma euro akawanda zvisingaite kuti ndinyore mese munhu wandinogara naye pakubhadhara-iwe-enda foni yeIrish, vandaidzidza navo vakandiudza kuti nditore WhatsApp. Pamwe chete, ndakakwanisa kufonera vabereki vangu uye nekushamwaridzana neshamwari muUS neIreland. Ini handina kuzomboda kushandisa foni yangu yejunky zvakare.
Mushure mekushandisa WhatsApp kwemwedzi mishoma, zvaive pachena kuti iyi yakapfava Wi-Fi yakashandisirwa chitauro yaive ichaita huru kuindasitiri yekufonera.
Makore mashoma mushure mekufamba kwangu kuenda kunze kwenyika, WhatsApp yakawedzera kuzivikanwa pazvaive yakawanikwa ne Facebook kubva 2014. Kubva ipapo, WhatsApp yakashanduka kubva kune chishandiso cheSMS kune yakazara chikuva chemaficha. Yakawanawo kutarisisa kukuru kubva kumabhureki.
Munguva pfupi yapfuura, muna 2018, iyo App yakagadziridzwa kunyange mberi nekuwedzera a boka rekutaura sarudzo uye boka revhidhiyo mafoni. Nezvinhu izvi, makambani akafanana British Vogue yaigona kuvaka chat chatsungu yakazadzwa netarisiro uye kutumira zvirimo kana zvinopihwa kwavari. Zvichakadaro, zvimwe zvigadzirwa zvine kudzidziswa WhatsApp sechiteshi apo vatengi kana vanotarisira vanogona kuvasangana nemibvunzo nezve chigadzirwa.
Kunze kweiyo WhatsApp hombe mushandisi base uye mhando-inoshamwaridzika maficha, iwo maapps zvakare anova anokatyamadza kumakambani nekuda kwenzira yainodhonzwa muvashandisi kubva kumativi ese epasi. Ndichiri iyo app yakagadzirwa muUnited States uye inofarirwa muNorth America yose, nyika mbiri dziine vashandisi zvakanyanya chaiko India neBrazil.
Nekuda kwevateereri vayo vepasi rose, mhando dziri kutarisa kumusika dzepasi rese dzinogona kusimudzira WhatsApp, pamwe nemasocial network social network, uye vanobhadhara kushambadzira kushambadzira.
Asi, kunyangwe paWhatsApp mikana yepasirese, chikuva chichiri kuunza matambudziko mashoma emakambani
Asati asvika 2019, fomati yeWhatsApp yaive yakagadzirirwa kuchengetedza ruzivo rwevanhu rwekuvanzika kuitira kuti maakaundi asina kujairika arege kuwana nyore nyore nekuvatumira mameseji. Izvo hazvina kutanga zvakagadzirirwa kushandiswa kwebhizinesi. Nekuda kweizvi, iwe kana chako hachikwanise kugadzira maakaundi eruzhinji ayo vashandisi vanogona kutsvaga.
Nekuti WhatsApp yaida kuti iwe uzive ruzivo rwemumwe munhu, mabhii zvakafanana aisakwanisa kushandisa netiweki kutsvaga, kuwedzera, uye kusangana netarisiro dzinogona kunge dzaifarira chigadzirwa chavo. Neimwe nzira, makambani acho angazoda kuwana ruzivo rweWhatsApp zvakananga kubva kune tarisiro kana runyorwa rwekuonana rwavaive narwo kana kuwedzera ivo.
Imwe nyaya neWhatsApp yaive yekuti waisakwanisa kutsikisa zvirimo pachena. Nepo Facebook kana mamwe mapuratifomu achikubvumidza iwe kutumira zvemukati kune vateereri pane zvinodyiwa kana chimiro, iwe waifanira kugadzira boka revanoonana neWhatsApp nekutumira zvinongedzo ipapo.
Asi, zvinhu zviri kuchinjika mhando paWhatsApp.
WhatsApp Inokura Mikana Yemabhizinesi
Recently, WhatsApp neFacebook zvakazivisa nezvekutanga kweWhatsApp kweBizinesi, app inobvumira makambani kuti ivake account ine kambani ruzivo, tendera vanobatana kuti vatumire mameseji kana kuvadaidza, uye vatarise zviitiko zvinoenderana neapp.
WhatsApp yeBhizinesi, iyo yawana vanopfuura mamirioni mashanu vashandisi kubvira payakatangwa, zvakare inogonesa makambani kuvaka uye kugovana chigadzirwa catalogalog, iyo inosimbisa zviripo zvino uye inogona kubatanidza kune ecommerce saiti. Kamwe bhizinesi parinogadzira katarogu, timu yayo yekushambadzira inogona kugovana chinongedzo chayo paprofayile yechiratidzo kana mukutaurirana netarisiro. Heino inokurumidza demo yekuti mashandiro echinyorwa anoshanda sei:
Pamusoro pezvo, kunyangwe kubatana nehurongwa hwakawanda hwepasi rese kwakanetsa pakutanga paWhatsApp, mamwe makambani vanoti mapoka madiki avakataurirana nawo aive akabatikana kupfuura vanhu vazhinji vevanhu. Izvi zvinogona kuve nekuti munhu anopa kambani yavo ruzivo rwekuonana kana anoda kuwedzera kusangana kwekambani kuti angave anoshamisira kufarira kudzidza nezve iyo mhando kubva pakutanga.
Kunze kwekubatana kweWhatsApp nemikana yekumaka, humbavha hwepa Facebook papuratifomu hunobatsirawo vanoshambadzira. Zvichawanikwa izvozvi ratidza kuti kutsanangurwa kwekushambadzira kwekutangisa kwakonzera ROI yakawanda nekuda kwekugoverana data pakati peWhatsApp ne Facebook.
kunyange zvazvo Facebook inoronga kubatanidza WhatsApp ne Instagram mukati mayo pachayo mureza wepuratifomu, CEO Mark Zuckerberg anodaro WhatsApp icharamba yakamira iyo inobatsira kubva kuApple's app ecosystem.
Nekuti WhatsApp ibasa riri kukura iro pamwe risingazoregedzwe chero nguva munguva pfupi, mabhizimusi eese saizi ari kuenderera kuyedza nayo. Maindasitiri Epamusoro paWhatsApp
Munguva pfupi yapfuura, maindasitiri maviri akasarudzika ari kuungana paWhatsApp kutsikisa uye fashoni. Zvichakadaro, makambani ezvekudya uye zvinwiwa akadaro Absolut vodka zvakare kusimudzira chikuva chekushambadzira.
Kana iwe uri kungovavarira zvakadaro kunanga vateereri vepasirese, zano reWhatsApp rinogona kuve rakakodzera kufunga izvozvi kana mune ramangwana. Asi, kana iwe uri mutsva papuratifomu, ungangoda kurudziro kuti udzidze zvakawanda nezve izvo zvinoita kuti zano rekushandisa mameseji mbozha ribudirire.
Kuti ikubatsire kuronga kuedza kwako kwekutanga, heano mashoma emamwe maitiro eWhatsApp akanakisa ayo vatengesi vanogona kudzidza kubva mairi.
Mashandiro Ei 5 Ari kushandisa WhatsApp
Adidas: "100% Yakasarudzika Pred"
Adidas anga achishandisa WhatsApp kubva 2015 kupindura mibvunzo nezve zvigadzirwa zvavo uye kusimudzira zvinhu zvitsva kune tarisiro. Asi munguva pfupi yapfuura, vakatanga chirongwa chekubatanidza chats kurarama uye kushambadzira kushambadzira.
Muna 2019, mushure mekuona kuti zvikwata zvemitambo zvaishandisa WhatsApp kutumira kutaurirana kwese-kwese kana zviziviso, Adidas yakazvipira kubatsira vatambi vemitambo yekuvaraidza "kubvarura" mutambi wehunyanzvi - kana "chikara" - kune mumwe wemitambo yavo iri kuuya.
Muboka reWhatsApp rakavhurwa kwenguva pfupi neAdidas, kambani yakagovana kuti vaida kubatsira timu yemitambo yekuvaraidza isina kukodzera kuhwina mutambo mumwe chete neku "vahaya" mutambi ane hunyanzvi. Kubva ipapo, vatambi vekutandara uye varairidzi vakabvunzwa kutumira WhatsApp mameseji vachiona mutambo wavanotamba, mutambo wavo unotevera waive riini, uye nei vaifanira kukwereta nyanzvi yemumhanyi kuti ahwine.
Mazuva apfuura, Adidas yakatumira yakananga meseji kune anokunda wekuvaraidza mutambi. Iye "pred" akabva aratidzira kumutambo wekuvaraidza akapfeka zvipfeko zvemitambo zveAdidas.
"Tinoziva kuti vateereri vedu vanoishandisa kugovera maficha, kusarudzwa kwechikwata - uye mameseji echikwata kuti vawane kutsiva kwemaminetsi ekupedzisira," Managing Edita Laura Coveney akaudza Digiday.
"WhatsApp yaive yakanakira kuita kweanoshanda 'Rent-a-Pred' hotline sezvo yaitendera vatengi kuti vagovana nesu ruzivo rwekuvanzika-mumwe-nesu kuti tiongorore, vasati vapihwa mutambi wePredator pedyo navo," Coveney akatsanangura.
Iyo Financial Times Inogovera Zvemahara Zvemukati
Funga chinyorwa chekare-chizivikanwa cheyakareba-fomu zvemukati chisingakwanise kubudirira pane yekukurumidza-mameseji app? Funga futi.
Mukupera kwa 2019, iyo Financial Times, inonyoresa-chete bhuku, yakatumira zvinyorwa zvemahara zvezuva nezuva mune yayo WhatsApp group. Sekureva kwaDigiday, zano rekugovana zvinhu rakavapa kutendeuka kwakawanda kupfuura mamwe mapuratifomu enharaunda, yakawanda yekuzivisa mhando, uye nzwisiso kuti ndeapi zvinyorwa akakosha kune avo vangangozvinyorera.
Zvinofadza, bhuku rakawanikwa kuti kunyangwe vateereri vayo vaive vashoma, yaibatirana zvakanyanya nezvakawanda uye kazhinji mukana wekunyora kupfuura vateereri pane mamwe mapuratifomu epamhepo.
Semuenzaniso, vanhu vakadzvanya chinongedzo che Financial Times paWhatsApp vaive 40% zvimwe kudzokera kunzvimbo iyi mukati memazuva matatu kupfuura avo vakadzvanya ma link avo pane mamwe chiteshi. Runyorwa rwakawanawo kuti traffic yakawanikwa kubva paWhatsApp yaive yakafanana neyakagashira kubva kune yavo yepakati Twitter post.
"Vanhu vaifarira mukana wekuti [nhau] dziuye nefoni yavo, vosundidzirwa kwavari kwavari, pasina kuenda kunzvimbo yedu, pane basa ravakatinyorera," akadaro Times 'Audience Engagement Editor, Alana Coates, muhurukuro.
Mhedziso Vodka Launch Party Campaign
Imwe yenyaya dzekutanga dzekubudirira paWhatsApp yakabva kukambani yedoro yeSweden Absolut Vodka. Pakushambadzira kuvhurwa kwayo Absolut Unique vodka chigadzirwa muna 2013, Absolut akatambura nekutyaira vateereri vepasirese uye yaikwikwidza zvakasimba nemamwe makambani evanonwa doro aive aine mamwe makore mazhinji enhoroondo achivatsigira.
Kusiyana nemamwe makambani anonwa doro, Absolut anga asina nyaya yekubudirira kwenguva refu kuseri kwechiratidzo chayo izvozvi. Nepo mamwe makambani edoro aigona kushambadza zviri nyore kuti vanga vachishandisa sei mabikirwo akafanana kwemazana emakore, Absolut aive yakagadzwa chete muna1979.
Nostalgic zvemukati, zvakaita se iyi shambadziro kubva kuna Jim Beam. Ichi chaive chimwe chinhu icho kambani diki, saAbsolut, yaisakwanisa kutamba senge nzira yekutengesa.
Panzvimbo pekugadzira nyaya yaitaura kune vateereri veese mazera, Absolut akafunga kuwedzera iyo WhatsApp's mameseji system kuwana kutendeseka uye kuziva kubva kune vadiki vateereri pasi pose.
Kucherekedza kutanga kweArgentina kweAtleol Unique, kambani yechinwiwa yakasimudzira kukwikwidza uko iwe unogona kuhwina matikiti maviri kumhemberero yechigadzirwa chitsva muArgentina. Kuti upinde matikiti, iwe waifanira kuenda paWhatsApp uye kutumira account yechikadzi inonzi Sven kuti umugadzikise nei iwe uchifanirwa kuenda kumafaro.
Maererano ne chidzidzo, 600 vashandisi veArgentina vakataurirana naSven mukati memazuva matatu. Mushandirapamwe uyu wakakurukurwa zvakanyanya munharaunda izvo zvakabatsira Absolut kuwana ruzivo rwechiratidzo kunyangwe kubva kuvanhu vasina kutaura neakaundi.
Kunyangwe iyo Absolut ikozvino iri hofori, inonyatsozivikanwa kambani, uyu muenzaniso wakanaka wekuti iyo brand yakazivikanwa uye yakaregedzwa WhatsApp sepuratifomu iyo inogona kushandiswa kukurudzira inozivikanwa yenzvimbo yekuzivisa uye kutengesa mune imwe chikamu chenyika.
Kudzoka muna 2014, Hellmann's, kambani yeUS-based Mayonnaise, yaida kusvika kune vateereri muBrazil, Argentina, Chile, Uruguay, neParaguay. Kuti vaite izvi, ivo vakahaya timu yevakuru vevabiki kuti vavabatsire nemushandirapamwe weWhatsApp.
Maererano ne The Cube, sangano rakabatsira pakuratidzira uku, vanhu zviuru gumi nezvitanhatu vakasaina basa iri uye murevereri akapindirana nomubiki kwemaminetsi makumi matanhatu.
Nemushandirapamwe we "" WhatsCook ", Hellmann akasimudzirwa maindasitiri nyanzvi senzira yekuonana nevateveri. Iyo kambani yaitoziva kuti vanhu vakatenga mayo yayo vaida kuishandisa. Asi, ivo zvakare vaiziva kuti vanhu vangangodaro vasingazive mazhinji mayonesiise-ane hushamwari mapepa. Neruzivo urwu, iyo mhando inosangana nevanhu vanofarira kubika uye kugadzirisa mutengi nekuvaratidza mashandisiro echinhu chikuru chaHellmann nenzira dzakasiyana.
Yoox Manheru Vatengi
Munguva yekuyedza kwaYoox WhatsApp, ivo vakaita $ 80,000 kubva mukutengesa kuburikidza neapp.
Uyu muenzaniso wakanaka wekuti kambani yakadzoreredza WhatsApp kuti isvike sei vanofarira tarisiro, varegedzeze kuburikidza nerwendo rwevatengi ihwo hunowirirana kwazvo nekutumira mameseji, uye nekubudirira kuita kutengesa vasina kana vatengi vachipinda muchitoro.
Kufamba Inotumira Mafoni Messaging
Sezvinoonekwa pamusoro, WhatsApp inogona kubatsira mabhenji kusimudzira tarisiro inonakidza mumutungamiri. Parizvino, iwe haugone kutumira meseji kune yese yemagariro chikuva, asi iwe unogona kutumira zvinongedzo uye nekuita nehukama avo vatoratidza kufarira chiratidzo chako.
Nepo mienzaniso yese ichiteera zvakasiyana, ivo vese vanosimbisa kuti nzira dzekutumira nadzo nhare dzakabatana zvikuru dzinogona sei kubatsira mukushambadzira.
Kana iwe uri kuronga kuyedza chiitiko cheWhatsApp, chengeta aya maitiro mundangariro:
Unofarira kudzidza zvakawanda nezve kutumira mameseji eapps? Buda iyi blog post iyo inofananidza WhatsApp, Snapchat, uye Kik.
Inoita Sei WhatsApp? (Bhuku Rekutangisa)